Gịnị bụ okpomoku nke ụwa? | Netwọk Mgbasa Ozi
Gịnị bụ okpomoku nke ụwa?
Gịnị ga-eme n'ọdịnihu? Nke a bụ ajụjụ ihe karịrị otu na ihe karịrị mmadụ abụọ n’ime anyị jụrụ onwe anyị site n’oge ruo n’oge, ọ bụkwa na ihu igwe ụwa na-agbanwe nke ukwuu ma dịkwa oke ọsọ. Ma ọ bụ, kama nke ahụ, ọrụ mmadụ, n'amaghị ama ma ọ bụ na-amaghị ama, na-agbanwe ya.
A na-emebi ndekọ kwa ọnwa, nke na-echegbu onwe ya. O yiri ka nkezi okpomọkụ ọ na-arịwanye elu, na-enweghị ebumnuche ịbelata. Ugbu a, n'ihi otu isiokwu pụtara na Magazin New York, anyị ga-amata kedu ihe bụ “ihe otiti” ma ọ bụ mmetụta nke okpomoku zuru ụwa ọnụ nke ahụ ga-emetụta anyị kachasị na ọkara na ogologo oge.
1 Ọnwụ site na okpomọkụ
2 Ọgwụgwụ nri
Ọnwụ site na okpomọkụ
Onu ogugu nke onwu oku ga abawanye. Ndi mmadu, dika anumanu ndi ozo, bu anumanu nwere ike ichikota aru anyi ... ma obu ruo oke: mgbe okpomọkụ dị n'èzí dị oke elu, ọ bụrụ na anyị edeghị mmiri nke ọma, anyị nwere ike ịnwụ n'oge na-adịghị anya.
Yabụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị na-agbaso nkwekọrịta Paris ma gbochie ọnọdụ okpomọkụ ụwa zuru oke karịa ogo abụọ, ọtụtụ obodo ga-anọgide na-ebighi.
Anyị niile, anụmanụ na osisi, chọrọ mmiri iji dịrị ndụ. Mana Mbelata nke mmiri ozuzo ga-eyi anụ ụlọ na ọrụ ubi egwu, bụ ọrụ ndị bụ isi maka mmadụ ka ọ dịrị. Ka ọ na-erule afọ 2100, onu ogugu ga-eto nke ukwu (a na-eme atụmatụ na anyị ga-eru ijeri 10), ma a ga-enwe nri dị ntakịrị.
Oké ọkọchị ga-adị nnọọ njọ; nke mere na ka ọ na-erule 2080 n'ebe ndịda Europe, enwere ike ịnọ na oke ọkọchị na-adịgide adịgideNa Iraq, Syria na ọtụtụ Middle East ha ga-enwe ọtụtụ nsogbu ịbute ọnụ ọgụgụ mmadụ niile.
Mgbe nri na mmiri kọrọ, ụmụ mmadụ na-enwekarị esemokwu. Anyị nwere ikike inye anyị nri oge niile, mana ọ bụrụ na akụ ndị a dị ụkọ, anyị anaghị enwekarị nhọrọ karịa ịkwaga na ịchọ ebe ka mma ma ọ bụ ịnọdụ na ịnwa ịnweta ihe anyị ga-etinye n'ọnụ anyị.
Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị elu site n'ọkwa ise, agha ga-abụ "nri ụbọchị anyị."
Iji gụọ ọmụmụ ihe zuru oke, ị nwere ike Pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Gịnị bụ okpomoku nke ụwa?
OSCARIÑO OSHORIO dijo
Chọrọ ileghara okpomọkụ ụwa, WAN chọrọ ikpuchi anyanwụ na mkpịsị aka
MGBE Anyanwụ bụ isi onye ọrụ nke mbilite nke okpomọkụ ụwa, gbakwunyere ndị mgba okpuru dịka: «EGOISM, PREPOTENCE, ANTAGONISM, HAT, RACISM»
BG NDG ỌRUL NA ỌRUL ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke na-eme ka okpomọkụ dị n'ụwa. OZI D L KA ỌR GR HM H MMAD HAVE KERE KWURU N'ONYE THATWA A NA-AD ISGH OF N'IME Ọ B ANLA NKE ND THE NA-EKWU NA HA B O NA ỌT PT P NA MGBE Ọ B ANDRAR ARBARRAR ARWA KWES THATR THAT KWES HASR THAT KWES ASR: KWES AR:: Ala, Ikuku na Oké Osimiri maka ndụ mmadụ, mmecha na imebiga ihe ókè nke ihe ndị dị na gburugburu ebe obibi adịghị mma maka ibi ... Ọ dabara na MKPUGHE A NA-atụ anya ya ma kpọsaa na amụma Akwụkwọ Nsọ .. Ọ B ISGH IT Ọgwụgwụ WORLDwa… Ọ B IS Ọgwụgwụ nke mmadụ. NA ND AS D WE KA Anyị MAARA.
Zaghachi OSCARIÑO OSHORIO
Ihe dị iche n'etiti Sunstroke na Heat Stroke, otu esi echebe onwe anyị n'aka ha
Kedu ka ụmụ anụmanụ nwere ike isi ghọọ okwute. Ihe okike.